नेपालसँग एकता नहुने ओलीको ठहर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, को को बन्दैछन् मन्त्री ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार नेपालसँग एकता नहुने ओलीको ठहर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, को को बन्दैछन् मन्त्री...
पछिल्लो समय नेकपा (एमाले)मा देखिएको विवाद अब नमिल्ने सम्भावना बढेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले केही दिन माधव नेपाल समूह फेरि मिल्न आउन सक्ने भन्दै यसअघि जनता समाजवादी पार्टीका ठाकुर–महतो पक्षलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सात मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । उनले यी मन्त्रालयहरु नेपाल पक्ष र माओवादीबाट एमालेमा आएको समूहलाई समावेश गर्नका लागि आफूसँग राखेका थिए ।
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका थिए ।तर, माधव नेपाल समूहले यो ६ बुँदे प्रस्तावलाई ओलीको जालझेलको संज्ञा दिएको छ ।
मंगलबार मात्र ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले ललितपुरको एक होटलमा छलफल पनि गरेका थिए । तर, यो छलफलमा पनि नेपाल पक्ष सरकारमा समावेश हुने वा ओलीसँग मिल्ने सम्भावना देखिएन । ‘दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा हुँदा छलफल भयो तर सकारात्मक चाहिँ भएन,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले फरकधारलाई बताए ।
योसँगै माधव नेपाल पक्षसँग एकताको सम्भावना अब नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले ठहर गरेका छन् । अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा उनी जुटेका छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक सहज भने छैन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समूहले बाँकी सातै मन्त्री पद आफूहरुले पाउनु पर्ने अडान राखेको छ । बादल समूहसँग प्रधानमन्त्री ओलीले ३ जना मन्त्री दिनसम्म सकिने आश्वासन दिएका छन् ।
यता, एमालेमा नै पनि ओली पक्षका नेताहरुमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ, गृहमन्त्री । गृहमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री ओलीले कास्कीका नेता खगराज अधिकारी ल्याउने सम्भावना बढी छ ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार गृहमा अधिकारीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि साथ रहेको छ । त्यस्तै, गृहमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्ण थापालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । ओलीनिकट नेताहरुमा प्रदीप ज्ञवाली, विशाल भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, नारादमुनि राना, शान्ता चौधरी, निरुदेवी पाल, राजेन्द्र गौतम, कृष्णभक्त पोखरेल लगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ ।
मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका महेश बस्नेतको पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल नरहेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, मन्त्रीमा फेरि आउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुल बाँस्कोटालाई पनि प्रस्ताव गरेको तर बाँस्कोटाले आफू यसपटक मन्त्री नबन्ने बताएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट मन्त्रीहरु बनाउँदा यसपटक भौगिलिक, जातीय तथा लैंगिक सन्तुुलन मिलाउनु पर्ने जोड दिएका छन् ।
Previous articleश्रृंखलाले हस्तान्तरण गरिन् मिस वर्ल्डद्वारा महामारीविरुद्ध नेपाललाई सहायता प्रदान रकम
Next article६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहले हिजो देखि सुरु भएको खोप लगाउन कहाँ जाने ?